विद्यार्थी नेता भण्डारीको ज्ञानेन्द्र शाहीलाई प्रश्न-तुलसीपुर बजार ठप्प पार्दा कानुनीराज्य र संविधानको याद आएन ? — SuchanaKendra.Com
विद्यार्थी नेता भण्डारीको ज्ञानेन्द्र शाहीलाई प्रश्न-तुलसीपुर बजार ठप्प पार्दा कानुनीराज्य र संविधानको याद आएन ?
प्रिय मण्डले ज्ञानेन्द्र शाही जि ! तपाई जस्तो अभद्र शैली त आउदैन तर तपाई र तपाईका अन्धभक्तहरु लाई मेरा प्रश्न ?
प्लेन १५-२० मिनेट जाम पर्दा मन्त्रीलाई गालिगलौज सहित थर्काउने तपाईले भर्खरै तुलसीपुरको बिपि चोकमा कार्यक्रम गरेर २-३ घण्टा ब्यस्त सडक जाम पार्दा तपाइलाइ कानुनी राज्य र संविधानको याद आएन ? त्यही नजिकको अरनिको मैदानतिर कार्यक्रम गर्न सक्नुभएन ?
दिनकै प्लेन चढेर कार्यक्रम भ्याउन जाने पैसाको श्रोत के हो ?
मन्त्री जस्तो ब्यक्तिलाई तपाई असभ्य ब्यवहार गर्नुहुन्छ भने जनताले तपाईलाई कस्तो ब्यवहार गर्ने ? तपाई अब मुकुन्दे बन्दै हो ? के तपाई फेसबुकको हिरो बन्न खोजेको हो ?
अन्तिममा बारम्बार पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसङ्ग भेटघाट गरि राजनीतिक सरसल्लाह र आदेश लिइ राख्ने तपाई ,गणतन्त्र बिरोधि होइन भनेर कसरि पत्याउनु ?
(नोट:- हिजोको नेपालगन्ज घटनामा समय ब्यवस्थापन गर्न नसक्नु र उहाँको कारणले यात्रुमा पर्नगएको असुबिधाप्रति मन्त्री योगेश भट्टराईको गल्ती स्विकार्दै क्षमा मागिसकेको अवस्था छ,तर तपाईंको उक्त ब्यवहारको मुल्य कसरी सच्याउने हो त )